Ntugharị Asụpe – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Site na Editor | Jenụwarị 17, 2022
💫 Spin A Spell – Nweta mkpụrụ ego anwansi💫
Weghachite ụlọ Ime Anwansi nke gị na ụwa mara mma nke Spin A Spell!
Nwee obi ụtọ na njirimara ndị a:
– Ederede nkedo iji wakpo ma zuo ohi n'aka ndị enyi
– Họrọ anụ ụlọ gị wee jiri nka kacha mma anụ ụlọ
– Nweta ego iji chọọ ụlọ Ime Anwansi mma
– Chepụta ogige ubi pụrụ iche nke gị
– Soro ndị enyi gwuo egwu to compete in the Magic Tournament!
Akpọrọ Selina na mberede na teleport iji weghachi Magic Mansion. Njem njem ọhụrụ ya jupụtara na ihe egwu, ihe omimi na ndị ọkachamara mara mma. Ya na onye ibe ya tụkwasịrị obi Fluffy ka o duzie ya, Selina nwere ike bụrụ onye nkuzi nke nnukwu asọmpi Ime Anwansi?
Jiri Spells na Ndị Ọkachamara ibe!
🔮 Mụta ịsacha mkpụrụ okwu ọhụrụ iji weghachi ubi wee kpughee ihe nzuzo zoro ezo. Jiri mkpịsị aka gị chepụta Mansion Magic nke gị. Ka ị na-enyocha ogige ndị ọzọ ka ị ga-amụta ọgụ maka asọmpi Ime Anwansi Ukwu!
Mwakpo na izu ohi n'aka ndị enyi!
⚡ Jiri sppe oghere pụrụ iche ịwakpo ndị enyi ọkachamara gị! Tụgharịa ha ka ọ bụrụ frogs ma ọ bụ mummies, ma ọ bụ na-awakpo na-ezu ohi na-anakọta ha ego. Mana kpachara anya maka mwakpo na-abata, tụgharịa iji nweta Ọta ma chebe mkpụrụ ego gị.
Na-akwalite nkà anụ ụlọ!
🐾 Chọgharịa Ime Anwansi ma nakọta anụ ụlọ ọkacha mmasị gị. Anụ ụlọ ọhụrụ ọ bụla nwere nka pụrụ iche na spins n'efu iji nweta Super Bonus. Jiri nri anụ ụlọ kwalite ma kwalite anụ ụlọ gị ka ị nwekwuo ụgwọ ọrụ.
Chịkọta kaadị niile!
🎁 Tụgharịa iji nweta igbe mkpụrụ ego akụ, na kaadị anwansi. Chịkọta kaadị niile dị na nhazi iji nweta ụgwọ ọrụ siri ike. N'ubi ọhụrụ ọ bụla ị na-achọ mma, ụgwọ ọrụ setịpụrụ kaadị gị ga-aka nke ukwuu.
Soro ndị enyi gwuo egwu!
Soro ndị enyi ọhụrụ na-atọ ụtọ 2021.
Soro Spin A Spell maka onyinye na onyinye pụrụiche!
Soro Ogbe, Ka anyị gwuo ọnụ!
Ị na-enwe nsogbu?
Biko kpọtụrụ anyị site na izipu ozi ozugbo na ibe Facebook Fan anyị dị n'elu, ma ọ bụ zitere anyị email na selina@aladinfun.com
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Spell, Spin
← 456 Egwuregwu Ịlanahụ Onye Nkwata – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ọdụ ndị mara mma: Egwuregwu Otome – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
Survive Doomsday – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Falling Stickman Ragdoll 2D – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
My Mini Zoo: Animal Tycoon Cheats&Mbanye anataghị ikike
Displace Story – Ndị aghụghọ ule aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Blue Monster Escape: Isi 2 Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Crashing Cars – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Grow Archer Chaser – Idle RPG Cheats&Mbanye anataghị ikike